‘साहित्यलाई अनुत्पादक भन्नेप्रति दया लाग्छ’
कला / साहित्य अन्तर्वार्ता
सरल सहयात्री तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ब्रिगेड कमान्डर थिए । धेरै युद्ध लडे । धेरैपटक ज्यान जोखिममा पर्यो । त्यतिबेला पनि उनी साहित्य सिर्जना गरिरहन्थे । सहयात्री शान्ति प्रक्रियापछि पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
अहिले जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सरल सहयात्री विद्रोही स्वभावका छन् । तर, उनको साहित्य सिर्जना निकै कोमल छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालसँगै सगरमाथा आरोहण गरेका सरलले युद्ध, आरोहण र शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिक स्थितिमाथि उपन्यास लेखेका छन्, शिखरको ढुंगा । उपन्यास शिखर ढुंगा बारे कृतिकार सरल सहयात्रीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘शिखरको ढुंगा’ कस्तो उपन्यास हो ?
साहित्यिक नजरले हेर्दा ‘शिखरको ढुंगा’ नयाँ विषय हो । यसअघि पनि हिमाली क्षेत्रबार विभिन्न कृति सार्वजनिक भए पनि हिमाली भेगका नागरिकको कठिन भोगाइबारे खासै कृति आएका थिएनन् । हिमाललाई सौन्दर्यका हिसाबमा मात्रै वर्णन गरियो । यसर्थ हिमालको दर्द र हिमाली भेगका नागरिकको करुण कथालाई प्रस्तुत गरेको छु, शिखरको ढुंगामा ।
सगरमाथा चढ्दाको अनुभवसँगै आरोहणका क्रममा भोगेका कठिनाइ र सफलतालाई राजनीतिक बिम्बका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छु । सारमा भन्नुपर्दा हिमाल आरोहण, हिमाली भेगका नागरिकको स्थिति, माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न बढेको चुनौतीको ‘फ्युजन’ हो, उपन्यास शिखरको ढुंगा ।
उपन्यास सार्वजनिक भएको दुई महिना बढी भयो । कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । व्यापार र चर्चाको हिसाबमा उल्लेख्य नभए पनि गुणस्तरको हिसाबमा निकै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया पाएको छु । शिखरको ढुंगा बजार पिट्ने प्रकृतिको भन्दा पनि संग्रहनीय छ । यसको बजार पछिसम्म पनि कायम रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाई पूर्वजनमुक्ति सेना । अहिले पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनुुहुन्छ । साहित्यिक पुस्तक लेख्ने सोच कसरी आयो ?
हो, म तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डरसम्म भएँ । आज पनि सक्रिय राजनीति मेरो कर्म हो । साथसाथै मेरो विचारमा साहित्य राजनीतिको अभिन्न अंग हो । कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि साहित्यकर्मी भावुक हुन्छन् । तर, साहित्यकारसँग भावना मात्रै हुँदैन । आलोचनात्मक चेत पनि हुन्छ । मभित्र यस्ता चेत योद्धाका रूपमा युद्ध मैदानमा लड्दै गर्दा पनि थियो ।
दर्जनौंपटक मृत्युलाई नजिकैबाट नियालें । सयौं मृत्युसँग साक्षात्कार गरें । यद्यपि, आफ्नै पक्षबाट विपक्षहरुमाथि जान–अन्जानमा हुने अन्यायले मन पोल्थ्यो । नेताहरुले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले आक्रोशित बनाउँथ्यो । कतिपय कुरा मनमै राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । त्यतिबेलाका उकुसमुकुस भावलाई व्यक्त गर्ने माध्यम बनाएको थिएँ, डायरी र कलमलाई ।
हरेक दिन मेरो डायरीको थुप्रै पाना भरिन्थे । सम्भवतः मनभित्रको उकुसमुकुसलाई डायरीमा लेख्दा लेख्दै साहित्यप्रति आकर्षित भएँ । साहित्यले मलाई मानवीयताप्रति बढी उत्तरदायी बनाएको छ । कयौं उत्तेजना मेरो मार्ग भड्काउन प्रयत्न भए । त्यसका बाबजुद जसरी एउटा पुस्तक भयो, यो खुसीको कुरा छ । भावनासँगै वस्तुपरक र आलोचनात्मक चेतका साथ लेखिएको पुस्तक लेखिनुको पृष्ठभूमि युद्ध पनि थियो ।
हिमाल आरोहणका बहुआयामलाई पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गर्नुभएको रहेछ । त्यो आफैंमा ठूलो विषय थियो । तर, किन जबर्जस्त राजनीतिक रंग दिन खोज्नुभयो ?
त्यस्तो लाग्छ र ? तैपनि, अनुभवको महत्त्वपूर्ण यात्रा, जसले गणतन्त्र निर्माणसम्म अथक मृत्युञ्जयी विद्रोह गर्यो । त्यो अनुभवको मसिनो छायालाई सगरमाथाको यात्रासँग तुलना गरिएको सत्य हो । यसर्थ पनि पुस्तकमा यो कुरा सान्दर्भिक भएको छ कि कुनै पनि लक्ष्यमाथि सफलता प्राप्त गर्न हिमाल आरोहणको कठिनाइसँग तुलना हुने गर्छ । यस्तो मान्न सकिन्छ ।
मान्छेहरु हिमाल आरोहण गर्ने विषयलाई निकै कठिन कार्यका रूपमा लिन्छन् र यो सत्य हो । तर, सयौं वर्ष जरा गाडेर बसेको व्यवस्था परिवर्तन आरोहणभन्दा कुनै पनि हालतमा सहज कार्य हुँदैन । यसबीचको तुलनात्मक साहित्यिक प्रस्तुति भन्न मिल्छ होला ।
पुस्तकबाट थाहा हुन्छ कि तपाईं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । किन ?
आजको प्रश्न यो हो कि राजनीतिले परिस्थिति निर्माण गर्छ कि परिस्थितिले राजनीतिलाई डोहो¥याउँछ ? परम्परावादी राजनीतिक नेतृत्व सधैं परिस्थितिलाई दोष दिएर राजनीतिलाई बहावको गतितिर धकेलिदिन्छन् । राजनीतिलाई सही मार्गमा हिँडाउने हो भने उद्देश्यको मार्गमा परिस्थिति निर्माण गर्ने हिम्मत र हैसियत राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
लेखक यसकारण असन्तुष्ट हो कि आजको गतिभन्दा अत्यधिक तीव्रता चाहिएको छ देशलाई, समृद्धिको मार्गमा पुर्याउन । सोचमा बिलकुल एक क्रान्तिकारी सपनाप्रति उत्तरदायी व्यक्तित्व चाहिएको छ । जुन हिजोका विद्रोहले मार्गदर्शन गरेका थिए ।
जसरी शिखरको ढुंगालाई तपाईंले बिम्बको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले आशाभन्दा निराशा बढाउने गरी कथाको अन्त्य भएको विश्लेषण छ । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, पाठकको विश्लेषण र निष्कर्षलाई म उच्च महत्त्वसाथ सम्मान गर्छु । कुनै पनि उपलब्धिको पछाडि त्याग र बलिदानको असीम शृंखला जोडिएको हुन्छ । यो कुरा पनि यत्तिकै सत्य हो । बलिदानको शृंखला हुनेबित्तिकै कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने पक्कापक्की छैन ।
ख्याल गरिएन भने विजयको सन्निकट पुगेको लक्ष्यबाट फिर्ता हुनुपर्ने पनि हुन सक्छ । अर्थात् प्राप्त भइसकेको विजयबाट पनि हात धुनुपर्ने हुन सक्छ । यो एक सन्देश हो, पुस्तकमा । निराशा होइन ।
पुस्तकमा लेखकको विद्रोह झल्कन्छ । व्यवहारमा त्यो कत्तिको सम्भव छ ?
विद्रोह भन्ने शब्दको ओज त निकै नै फराकिलो अर्थमा छ । विद्रोह उथलपुथलकारी अभियानको एक नामकरण हो । जनयुद्ध एक विद्रोह थियो, व्यवस्था परिवर्तनको । त्यस्तै, जनआन्दोलन अर्को विद्रोह । तर, संघर्षचाहिँ आफ्नै पार्टी, आफ्नै नेता, सहयात्री/सहयोद्धा र शैली/संस्कार विरुद्ध भइरहन्छ ।
यदि त्यो प्रगतिको हितमा छैन भने । आलोचनात्मक चेतको विकास गर्ने र प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत हरेक नागरिकको हकमा निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । यदि यस्तो हुन सकेन भने जस्तोसुकै क्रान्तिकारी देखिएका शासक पनि अनन्त आफूलाई महानायक घोषणा गर्न पछि पर्दैनन् । यही चेतलाई तपाईंले विद्रोह भन्नुभएको हो भने स्वाभाविक हो ।
अहिले बजारको मागभन्दा फरक धारको लेख्नुभएको छ । उपन्यासको बजार कस्तो छ ?
जुन किताब पढेर केही शिक्षासमेत प्राप्त हुन्छ, त्यस खाले पुस्तकप्रतिको भोक नयाँ पुस्तामा जगाउन अझै धेरै जरुरी छ । यद्यपि विस्तारै नयाँ पुस्तामा पठन संस्कृति विकास हुँदै गएको छ । उपभोक्तवादी संस्कृतिले युवाको दिमागमाथि जसरी कब्जा गरिरहेको छ, समाजका लागि यो डरलाग्दो चुनौती हो ।
उत्तरआधुकितावादमाथि जित्ने हो भने हामीले नयाँ पुस्तालाई उपभोक्तावादविरुद्ध लड्न सक्ने हतियारका रूपमा पुस्तक सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको अर्थ मेरो पुस्तक त्यसविरुद्धको सशक्त हतियार होइन । तथापि, पपकर्न मोडलका किताबभन्दा बिलकुल फरक हो । यसले केही न केही शिक्षा अवश्य दिन्छ । अपेक्षाभन्दा बढी बिक्री भएको छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव लड्नुभएको थियो । पराजित हुनुभयो । विजयी हुनुभएको भए यस्तो किताव लेख्नुहुन्थ्यो ?
म चुनाव यस कारण लडेको थिएँ कि जनतासँग गरिरहेको प्रत्यक्ष साक्षात्कारलाई सही मार्ग दिन सकूँ र अझ धेरै गतिवान् बनाउन सकूँ । मैले चुनाव जित्न सकिनँ । तर, यसको अर्थ म मेरो कर्मबाट शिथिल भएर किताब लेख्न बसेको होइन । मैले चुनाव जितेको भए पनि यो पुस्तक निस्कन्थ्यो । बरु त्यो अनुभव थप कर्मका लागि काम लाग्थ्यो होला र कुनै सन्दर्भमा अर्को पुस्तक बनेर निस्कन सक्थ्यो ।
नेपाली राजनीतिमा साहित्यको भूमिका के कस्तो पाउनुहुन्छ ?
साहित्यले समाजकै आधार तयार पार्दै आएको छ । राजनीति त्योबाट अलग रहन सक्ने विषय नै भएन । समग्रमा हरेक दर्शन स्वयं साहित्य हो । त्यसकारण यसलाई अलग अर्थमा बुझ्नुहुन्न । जसले राजनीतिबाट साहित्यलाई अलग्याउन खोज्छ, वास्तवमा न त्यसले साहित्य बुझेको छ न राजनीति । कहिलेकाहीँ हामीबीच पनि दमित कलुषित भाव अनयासै व्यक्त हुन्छन् ।
हामी संस्कृतिकर्मी अर्थात् सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्छौं भनेर परिचय दिइयो भने ‘ए गानाबजाना’ भनेर उडाउन खोज्छन् । बिचरा ! तिनको बुझाइको हविगत देखेर दया लाग्छ । तिनलाई न संस्कृति र राजनीतिको महत्त्व थाहा छ, न साहित्य र राजनीतिको ।
न त गाना बजानाले पुरातन चिन्तनमाथि कसरी प्रहार गरेको थियो र अझै गर्न सक्छ भन्ने चेत नै । ती पनि ठूलठूलै नेता भइसकेका छन् । जे होस्, साहित्य समाज र राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण अंग हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २१, २०७६, १७:५२:००
पत्रकार सुवेदीको शब्दमा 'ईतिहास' गीत, 'हैन हैन भनिस् भने गाडीदिन्छौँ, शिरुपाते खुकरीले काटिदिन्छौँ'